Ungayisebenzisa njani icarbide yephepha leSlitting Knives ngokuchanekileyo?
1: Umsebenzi ochanekileyo wokulungisa i-carbide circular blades kumnini:
Qinisekisa ukuba i-carbide inceda i-blade blade ihleli izinzile, i-edge-edge ayikwazi ukuya ngasekhohlo okanye ngasekunene okanye ixhume inyuke isenyuka ngexesha lokusebenza.
2: Isixhobo sokulola imela:
Ukuloba kweemela kungasetwa ngesandla okanye kwenziwe ngokwezifiso. Imathiriyeli yevili lokusila kufuneka ifane kunye neencakuba zokuqhekeza incence, ukufezekisa ukulola ngokukuko, Yandisa ubomi benkonzo
3: Isixhobo sokupholisa isixhobo:
Ngenxa yokuba ibhodi yekhadi enamazinyo isenobushushu obuthile xa idluliselwe kumatshini wokusika, kwaye ukungqubana nekhadibhodi kubangela ukuba i-tungsten carbides incamathele kwisilayidi bladeedge ukufudumeza. Ubukhali bemela ebukhali buchaphazelekile. Ikhadibhodi enamakhonkco ayibukeki kakhulu. Ukuxhotyiswa ngesixhobo sokupholisa kunokuphucula ngokufanelekileyo imeko engathandekiyo yomda osikiweyo.
4: Kulumkele ukunamathela kwiimela
Iglu yokuncamathela kwiimela iya kwandisa ukutyeba kweemela, kwaye ikhadibhodi iya kuba phantsi kokukhuhlana okungaqhelekanga, okuya kubangela imveliso ephantsi kwaye kuchaphazele ixesha lokuphila. Amanqaku alandelayo unokuthintela le nto:
a: Nciphisa ngokufanelekileyo isixa seglue kumatshini wokuvelisa iphepha.
b: Jonga ukuba iglu iyasetyenziswa na kumanqwanqwa aphezulu.
c: Jonga ukuba indawo yeglue kunye neglue line zinkulu kakhulu.
d: Ukunciphisa ngokufanelekileyo isantya sokusebenza kwekhadibhodi, ukuze iglu iqiniswe ngokupheleleyo.
5: ibhodi ukusika Base:
Uqhekeko blademust luya kuzinziswa kwimixholo yebhodi yokusika yesiseko ukusika ikhadibhodi. Phantsi kweemeko eziqhelekileyo, i-edge edge ayifanele ifakwe kwi-gap ngaphezu kwe-10mm ubunzulu.
Ukuthenga iiplitshi zesilayidi zepremiyamu ezivela kumenzi wobuchwephesha- Zweimentool!
Ixesha Post: Aug-23-2021